Imirikiti na-akpọ m Doug, taa ọ bụ Papa | Martech Zone
Ọtụtụ na-akpọ m Doug, taa ọ bụ papa m
Monday, June 18, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
N'ikwu eziokwu n'eziokwu, atụghị m atụmatụ oge nke post a. Otú ọ dị, ọ bụ ihe ndaba, na m ga-akọrọ gị ya niile.
Fred nwetara otutu ndi mmadu no na tizzy n'oge na-adịbeghị anya mgbe ọ jụrụ banyere afọ na mmetụta ya na talent entrepreneurial. Gụnyere na azụ azụ bụ Dave Onye Ike, Scott Karp, Steven Hodson, na ọtụtụ ndị ọzọ kwuru.
Enweghị m ọtụtụ ihe ikwu banyere isiokwu ya mere m kwuru obere okwu. Enwere m ekele maka ebe ọrụ dịgasị iche ebe ndị ntorobịa na ahụmịhe nọ. Ndị na-eto eto na-etinyekarị uche na ókèala ya ka ọhụụ ha na enweghị ụjọ na-enyefe onwe ha nke ọma itinye ihe egwu na ị nweta ụfọdụ ezigbo azịza. N'ụzọ na-emegide onwe m, achọrọ m iche banyere onwe m dịka nwa okorobịa 39 na-ekwukarị okwu m ma na-achọ ụfọdụ nnukwu ụzọ ọzọ na ụkpụrụ. Ahụmahụ, n'aka nke ọzọ, na-ejigide ihe egwu dị na nsonaazụ - oge ụfọdụ na-egbochi ọdachi.
Dịka onye njikwa ngwaahịa, ihe egwu m na-eweta abụghị naanị ụlọ ọrụ m. Egwu m chere na enyerefe ndị ahịa 6,000 na-eji sọftụwia ahụ na ụlọ ọrụ ha. Nke ahụ bụ piano mara mma piano nke dị n'elu ụlọ, yabụ achọrọ m ijide n'aka na ụdọ ahụ nwere nchebe na eriri niile ejirila tupu anyị ekpebie ịkwaga ya.
Odi nma, papa!
Taa dị iche. Mgbe m tinyere ụfọdụ ókè taa na akụ na ihe oru ngo, enwere m ike ịgwa mmadụ okwu njakịrị, sị, “Dị mma, papa!”. Ọ bụ ezie na ọ bụ iji kparịa m, ejiri m nwayọọ jụ ya. Ọ bụrụ na e nwere otu ihe m kacha eji etu isi na ndụ m, ọ bụ nnukwu nna.
Enwere m ụmụaka abụọ nwere obi ụtọ, abanyela na nsogbu .. na otu onye nabatara mahadum na nke ozo kacha nweta mmeri “Ghandi Award” n’ulo akwukwo ya. Ha abuo nwere egwu nke ukwe - otu na-abu egwu, na idekota egwu… nke ozo bu onye egwu na ndi egwu.
Yabụ, onye ọrụ ibe m nke obere ga-enwerịrị ike iche na “Papa”. Okwu a na-ato m nma. Ọ bụrụ na m adaa ka "Papa", ọ nwere ike ọ bụ n'ihi na m na-ejikwa ọnọdụ nke dị ka ịdọ nwatakịrị aka na ntị. N'ụzọ na-emegide onwe m, anaghị m enwekarị ọnọdụ ndị a na ụmụ nke m.
Afọ na Ọrụ
Nke a ọ gbanwere echiche m banyere afọ, azụmahịa, na azụmaahịa? Ọ dịghị ma ọlị. Ekwere m na anyị chọrọ enweghị atụ nke ntorobịa iji mee ka njedebe nke ihe anyị nwere ike nweta. M do kwenyere na ọtụtụ ndị ọkachamara na-aghọ ndị na-anabata ihe karịa afọ ole na ole ma na-agbada n'ụsọ oke. Enwere m mmasị na nkwekọrịta, ọ bụ ezie na m ka kwenyere nkwanye ùgwù, ibu ọrụ, na oke.
Ihe m na-akuziri ụmụ m bụ na m nọ n’ebe ha nọbu na mbụ, emehiela m, m wee na-atụ anya inyefe amamihe m mụtara. Nke a apụtaghị na ha ga-agbaso nzọụkwụ m, agbanyeghị. Enwere m mmasị na nwa m nwanyị nọ n'elu ikpo okwu mgbe ọ were m ọtụtụ afọ iji nweta obi ike ahụ. Enwere m mmasị n'eziokwu na nwa m nwoke na-aga College mgbe m na-apụ na enweghị isi ịbanye n'vytù Ndị Agha Mmiri. Ha na-eju m anya kwa ụbọchị! Akụkụ ya bụ n'ihi na ha ghọtara oke, ha na-asọpụrụ m, ha makwa na ha nwere nnwere onwe ime ihe ha ga-ahụ n'anya (ọ bụrụhaala na ọ ga-ewute ha ma ọ bụ onye ọzọ).
Enwere m olileanya na "nwa m" nọ n'ọrụ nwere ike ịmụta otu ihe ahụ! Enweghị m obi abụọ ọ bụla na ọ ga-enwe ike iju ụlọ ọrụ ahụ anya ma nwee mmetụta dị ukwuu, mana ihe mbụ first na-achọpụta ma na-asọpụrụ ahụmịhe dị ebe ahụ ma ghọta oke. Mgbe ịmechara nke ahụ, ju onye ọ bụla anya site na ịmegharị ụzọ ọhụrụ dị na ụzọ onye ọ bụla na-echetụbeghị. Aga m enyere gị aka iru ebe ahụ! E kwuwerị, gịnị bụ “Papa” maka?
PS: N'afọ na-esote, Ọ ga-amasị m kaadị Father'sbọchị Nna… yana ikekwe eriri.
M ka nwere ike ịdenye aha na Akwụkwọ akụkọ ma ọ bụrụ na…
Ọ bụ n'ezie na "Social" Media?
Jun 30, 2007 na 8:18 AM
Na-ada ka nwa okorobịa maara ka esi apị apị apịtị apịtị. Dịka onye isi ngalaba, achọpụtara m na ndị na-arụ ọrụ n'okpuru m nwere ekele maka omume gị. Site n'ụzọ, na-enwe ekele maka ụmụ gị rụzuru.